April 2009 – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
April 25, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မင်းသဘောပါ.. ဘာမဆိုပေါ့
၁) ငါတို့ ညစာ ဘာစားရင်ကောင်းမလဲဟေ (လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါက်ဆွဲခြောက် ပြုတ်ပေါ့)
၁) ငါတို့ မက္ကဆီကန်အစားအစာ စားကြမလား (ချဉ်ပေါင်ဟင်းလေးနဲ့ ငပိထောင်းဆိုရင်……)
၂) အာ … ဒါတော့ မဖြစ်ဘူးဟ။ ဟိုတစ်ခေါက်က ငါ့မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံတွေ ထွက်လာတယ်လေ
၁) အင်း၊ ဒါဆိုလည်း စီချွမ်းဟင်းလျာတွေ သွားစားကြရအောင် (တရုတ်ဆိုင်က This one, That one)
၂) မနေ့ကပဲ အဲဒါစားထားတာကို။ ဒီနေ့ရောပဲလား။
၁) အမ်။ ပင်လယ်စာဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူးလားလို့ (ငါးသေတ္တာဗူးလေး ဖောက်ရုံပဲ)
၂) အဲဒါ မကောင်းဘူးဟ။ ငါ ၀မ်းလျှောလိမ့်မယ်
၁) ဒါဆို ဘာစားချင်လဲ
၁) ဘာလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဟင် (ဖဲရိုက်ချင်ထှာ)
၁) ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြမလား။ မကြည့်တာ ကြာပြီပဲ (ပိုက်ပိုက်ကုန်လို့)
၂) အချိန်ဖြုန်းတာ တစ်မျိုးပါပဲဟာ။ ဘာကောင်းလို့လဲ။
၁) ဘိုးလင်း သွားကစားကြရင်ရော။ လေ့ကျင့်ခန်းလေးဘာလေး လုပ်ကြတာပေါ့ (အုန်းလွဲသွားရင် မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တဲ့လူကို ရှောင်လို့ရတာပေါ့)
၂) ဒီလို ပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့နေ့မျိုးမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ် ?
၁) ဒါဆိုလည်း ကဖေးတစ်ခုခုသွားပြီး ကော်ဖီသောက်ကြတာပေါ့ (ကျန်တဲ့ အအေးတွေ အားလုံး ဈေးကြီးတယ်လေ)
၂) ငါ ကဖိန်းဖြတ်ထားတယ်ဟ
၁) ဒါဆို ဘာလုပ်မယ်စိတ်ကူးလဲ
၁) ဒါဆို အိမ်ပြန်ကြမလား (ကြည့်လို့ကောင်းတာလေးတွေ တစ်ယောက်မှ မမြင်ရတဲ့အတူတူ)
၂) နင့် သဘောပါ
၁) ဘတ်စ်နဲ့ ပြန်ကြရအောင်။ ငါ အဖော်လိုက်ခဲ့မယ် (သူများမြင်တော့ ကိုယ့်မှာ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ရှိတယ်ပေါ့)
၂) ဘတ်စ်တွေက လူကျပ်ကျပ်၊ ညစ်ပတ်ပတ်နဲ့
၁) အိုကေ လေ။ ငါတို့ အငှါးကား စီးကြတာပေါ့ (တစ်စီးမှ မအားကြပါစေနဲ့ဘုရား)
၂) မတန်လိုက်တာ. …. နီးနီးလေးကို
၁) ကောင်းပါပြီ၊ ဒါဆို လမ်းလျှောက်ကြမယ်။ ရာသီဥတုလေးက သာယာပါဘိနဲ့ (မျက်စိအစာကျွေးစရာ လမ်းမှာ ရှာရဦးမယ်)
၂) ဗိုက်ဆာတယ်ဟာ …. မလျှောက်နိုင်ဘူး
၁) ဒါဆို ဘာလုပ်ချင်လဲ (ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့ဘူး)
၁) ညစာ အရင်စားကြရအောင် (ပြောရတာ ဗိုက်တောင် ချောင်လာပြီ)
၁) ဘာစားချင်လဲ (ဈေးမကြီးတာတွေပဲ ဖြစ်ပါစေ)
ဘယ်တော့မှ ဆုံးမလဲလို့ မမေးနဲ့နော်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင် အသုံးတော်ခံသွားသူများကို ကိုယ်မြင်ယောင်ချင်သလို မြင်ယောင်လို့ရအောင် (၁) နဲ့ (၂) လို့ သုံးလိုက်တာ။ သိပြီးသားဆိုရင် ………… (ဖွတဲ့ အလုပ်တော့ လုပ်လိုက်ပြီ၊ ကျန်တဲ့ကိစ္စ ကျွန်မ တာဝန်မဟုတ်တော့ဘူး။ ဟိ 😀 )
( ဒီဇာတ်လမ်းကို ဒီနေရာက ယူထားတာပါ။ အကြည်ဓါတ် ခြောက်ခမ်းနေလို့ နည်းနည်း ပါးပါး ငံပြာရည် ကျိုတာပါ။ )
Posted in ဟိုဟိုဒီဒီ, Uncategorized	| Tagged co-operative, funny, Life, negotiation | 1 Comment
April 21, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
BBC NEWS | World | Asia-Pacific | Girl chooses Japan over parents. ကမ္ဘာကြီးကို လုံးနေသည်၊ လည်နေသည်ဆိုတာ ပထ၀ီမှာ သင်ခဲ့ပြီး စီးပွါးရေး ပညာရှင်တို့က ပြားသွားပြီဆိုသောအခါ ကိုယ့်ခေါင်းကတော့ ချာချာ လည်သွားပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးမှာ တစ်နေရာကတစ်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတာ ဟိုးရှေးရှေး မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ် မပေါ်ခင်ကတည်းကပါပဲ။ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများအကြား စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး ဓလေ့ထုံးစံများကအစ ယှက်နွယ်ရောထွေးလာတာကိုပင် ကမ္ဘာပြားလာခြင်းဟု ပညာရှင်တို့ အဆိုရှိသည်တဲ့။ Passport တွေ တကားကား၊ ကျောပိုးအိတ် တလွှားလွှားနှင့် ကမ္ဘာပြားအနှံ့မှာ ရေကြည်ရာ၊ မြက်နုရာ ရှာနေကြရသော ခေတ်လူသားများအကြောင်းက ထူး၍ မဆန်းနိုင်တော့ပါ။ ရေမြေခြားကြသည့်အခါ အခုလိုညွှန်းဆိုထားရသော ဇာတ်လမ်းမျိုးကလည်း များလှစွာ။
မိဘနှစ်ပါးက ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသားများ။ ဂျပန်နိုင်ငံကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီ။ သမီးလေးကို ဂျပန်မှာ မွေးသည်။ သမီးလေး ၁၃နှစ်သမီးမှာ ကံခေချင်တော့ အမေ အဖမ်းခံရသည်။ အဖေ့ကိုလည်း မိသွားသည်။ ဒီသမီးကလေး သိထားသည်မှာ သူ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံသားတို့နှင့် အတူ ဂျပန်စကားပြောသည်။ ဂျပန်စာသင်သည်။ ဂျပန်အစားအစာ စားသည်။ ဂျပန် သူငယ်ချင်းများရှိသည်။ သူသည်- ဂျပန်တစ်ယောက်နှင့် ဘာများ ကွာခြားပါသနည်း။
သူတို့ ဂျပန်မှာ နိုင်ငံသားဥပဒေရော၊ လူဝင်မှု ဥပဒေရော အလွန်တင်းကျပ် ပြင်းထန်သည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။ မိဘနှစ်ပါးက သမီး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက်၊ သူတို့မိသားစု အတူနေခွင့်အတွက်၊ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်သို့ တက်ကာ တရားဆိုင်သည်။ ၃နှစ်ကြာ တရား ရင်ဆိုင်မှုအပြီး ဖိလစ်ပိုင် မိဘနှစ်ပါး တရား ရှုံးသည်။ သမီးအတွက် ရွေးချယ်စရာ လမ်းနှစ်သွယ်- မိဘများနှင့်အတူ ပြည်တော်ပြန်မည်လား။ ဂျပန်တွင် နေခဲ့ကာ သူတစ်ကိုယ်တည်း ဘ၀ကို ဆက်လက် တည်ဆောက်မည်လား။ သူတို့အတွက်မူ ပြည်တော်ပြန်ရန်မှတပါး အခြား လမ်းမရှိ။ ၅နှစ်တိတိ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပြည်ဝင်ခွင့် အပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အနေအထားအရ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေအထားကို မည်သို့မျှ မယှဉ်နိုင်။ မျိုးရိုးဇာတိကို လိုက်သော် သူတစ်ခါဖူးမျှ မရင်းနှီးခဲ့သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ သူကျင်လည်လေ့ကျက်ရာ ဓလေ့ထုံးစံက တစ်သက်လုံးနေလာခဲ့သည် ဂျပန်နိုင်ငံ။ မိဘများခမျာ သမီးဘ၀ရှေ့ရေး ရင်လေးလှသော်လည်း ဘာမျှ ၀င်ရောက် မဆုံးဖြတ်ရက်ကြ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ အရာအားလုံးကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ရန် မတိုက်တွန်းလိုကြ။ ဒီလို အမှုမျိုး လောလောဆယ် မိသားစု ၅၀၀ ခန့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်တဲ့။
ဒီအဖြစ်က ရေမြေခြားသည့် ကမ္ဘာပြားပေါ်မှာ နေရာတိုင်းလိုလို ရှိနေပါမည်။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှ ကွမ်းယာရောင်းနေသည့် အနောက်ရိုးမကို ကျော်ဖြတ်လာသူများတွင်လည်း ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံ ရှိနေကြပါမည်။ (ဘာဆိုင်လို့လဲဟု မျက်ခုံးတွန့်ပါက ရိုးမကျော်ဖြတ်လိုင်းကြေး၊ ရန်ကုန်အရောက်လိုင်းကြေးများဖြင့် ၀င်ရောက်လာနေကြသော အနောက်မှ အရှေ့သို့ လူဝင်မှု စီးကြောင်းကို စုံစမ်းကြည့်စေလိုပါသည်။) ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား-ထိုင်း နယ်စပ်၊ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ဒေသများဆီမှ မိသားစုများတွင်လည်း အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်–တပြေးတည်းဖြစ်နေသော ကာလမဲ့ အကြောင်းအရာများ ကြားရနိုင်ပါသည်။ လူအားလုံးသည် နေမင်းတစ်စင်းတည်း အောက်တွင် နေထိုင် မိုးသောက်ကြသည်ဆိုသော်လည်း သမိုင်းမတင်မီခေတ်ကို ပြန်သွားနေကြသည်မှ မဟုတ်ဘဲလေ…………….
(၀န်ခံချက်။ ။ ဤအကြောင်းအရာကို ဤနေရာတွင်ပင် တပိုင်းတစ ရပ်ထားလိုပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ ပါလက်စတိုင်းတွေ၊ အစ္စရေးတွေ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တွေ ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ခုလိုဖြစ်နေသည်ဆိုတာထက် ဘယ်လိုဖြစ်နေသည်ဆိုတာကိုပဲ တွေးမိနေတတ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုသည့်အရာတွင် အခြားသော အဓိပ္ပါယ်ကန့်သတ်ချက်များလည်း ရှိနေပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မအတွက်တော့ နေ့တိုင်းသည် တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာအတွက် တစ်နေရာသို့ ခြေလှမ်းလှမ်းနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။)
Posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged Development, Expectation, Life, strength |5Comments
April 20, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
အခုရှိထားသော ၀န်ကြီးဌာနများအကြောင်းကို အတင်းပြောမည်ဟု မထင်ကြပါနှင့်။ Web Browser တွေကို အမျိုးသမီးတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ် ရှင်းလင်းပြထားသော forward email ရတာကနေ ဒီစိတ်ကူး ပေါက်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းယောကျာင်္းလေးများ-အသက်ကလည်း ၃၀ ကပ်လာပြီ။ ကျော်သည့်သူလည်း ကျော်ကုန်ပြီ။ ခက်တာက အိမ်ထောင် အတည်တကျ မရှိသေး။ သူငယ်ချင်းများကလည်း ကလေးတွဲလောင်းဖြစ်သူကဖြစ်၊ ၀ါမ၀င်ခင် အိမ်ထောင်ထဲ ၀င်သည့်သူက၀င်၊ ၀ါကျွတ်သည်နှင့် လူပျိုကြီးဘ၀ ကျွတ်သူကကျွတ်။ ကိုယ့်မှာ အခြေအနေမဲ့ မဟုတ်သည့်တိုင် လူမဖြစ်သေးသလို ခံစားရသည်က ဒုက္ခ။ ဘ၀က– ၀န်ကြီးတော့ ၀န်ကြီးပါပဲ၊ ဘာဌာနမှာ ၀န်ကြီးလုပ်ရမှန်း မသိသည့်အဖြစ်။
ကိုယ့်အနားရှိနေသည့် မိန်းကလေးများကျပြန်တော့ ၀န်ကြီးပီပီ ရုံးအုပ်ကြီးလို မစဉ်းစားချင်။ ဒီတော့ ၀န်ကြီးဌာနဖြစ်ထိုက်သော အမျိုးသမီးများကို စဉ်းစားရမည်ပေါ့။
၁) လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကဲ့သို့သော အမျိ်ုးသမီး- စီမံကိန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခု အလျဉ်မပြတ် ရှာဖွေချမှတ်ရင်း မိမိကို ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး ကူညီမည့်သူ
၂) ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဲ့သို့သော မိန်းမသား- လူတိုင်းအားကျသွားရမည်။ လက်ထဲရောက်လျှင်တော့ မြဲရန် အတော်ခက်မည်။ ပြိုင်ဖက်က အများသားကိုး။ အောင်မြင်သော မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မိမိကို ရှာကျွေးသည်အထိ ထောက်ပံ့နိုင်သူ
၃) အမျိုးသားစီးပွါးရေးနှင့် စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနကဲ့သို့သော ဣတ္ထိယ- အလုပ်ဖြစ်မည်/မဖြစ်မည်ကို လူတိုင်းစိတ်မ၀င်စားသော နှစ်၂၀၊ နှစ်၃၀ စီမံကိန်းများဖြင့် တစ်ကိုယ်တည်း အလုပ်ရှုပ်နေလေသူ့အား လူသူလေးပါး မသိကြလေကုန်။
၄) ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးကဲ့သို့သော သတို့သမီး- လူတိုင်းလိုလိုနှင့် ဆက်ဆံနိုင်သည်။ လူတိုင်းလိုလို သိသည်။ သိခြင်းနှင့် မသိခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု မကွာခြား။
၅) လူတိုင်းလိုလိုနှင့် ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်သည်၊ ပြင်ပမှ မြင်ရလျှင် အထင်ကြီးဖွယ်အတိ။ အိမ်သားချင်းတော့ အဆင်ပြေစရာမရှိ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတိုင်း ပြဿနာတက်မည်-အမှတ် ၁နှင့် ၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
၆) လွန်စွာ အဖိုးတန်၊ ဣနြေ္ဒရ၊ လူတိုင်း အဖိုးတန်မှန်းသိသော်လည်း လက်ရှောင်ရမည့် တော်လေး၀၀င် မဒီကညာ-သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန
၇) မိမိတွင် ကောင်းသောအချက်များ ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းကို ကောင်းစွာ သိုဝှက်၍ ဣနြေ္ဒမပျက် ရပ်တည်တတ်သူ အထည်ကြီးပျက် လေဒီသည်ကား – စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
၈) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တူသော မိန်းမ- အိမ်သားချင်း ချစ်ခင်သလောက် ပြင်ပမှာ လူကြိုက်မများရှာချေ။
၉) ရပ်တကာရွာတကာ ဖြစ်သမျှကိစ္စ သူ အကုန်ပါ၍ ကောင်းစွာ ကူညီပါသော်ငြား ရလဒ်ကောင်း မထွက်တတ်သလို မျက်နှာကောင်းလည်း မရတတ်ရှာသူ- နယ်စပ်ဒေသ နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ကြီးဌာန
၁၀) မယောင်ရာကို ဆီလူးခြင်း၊ နှမ်းဖြူးခြင်းတို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်တတ်သူ၊ နေရာတကာတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်သလောက် အလုပ်မပြီးမြောက်ချေ။ ထိုသို့သော စွမ်းဆောင်ရှင် အမျိုးသမီးမှာ- လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန
၁၁) ဒီအရပ်တွင်ဖြစ်သော သတင်းကို ဟိုဘက်နားရောက်အောင်ပို့၍ ဟိုဘက်ကသတင်းကို ဒီဘက်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်အောင် ကောင်းစွာမွမ်းမံတတ်သော၊ ထိုအချက်ကို လူတိုင်း သိလျက်နှင့်ပင် သူ့အကျင့်ပဲလေဟု ခွင့်လွှတ်ထားရသူ မိန်းမသူမှာ- (အများသိတော်မူကြသည့်အတိုင်း) ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန
၁၂) ကိုယ်တိုင်က ကောင်းရာကောင်းကြောင်း မစဉ်းစား၊ ကောင်းပြီးသားကို ပျက်အောင်ဖျက်ပြီးမှ ကောင်းအောင် မည်သို့လုပ်မည်ဟု လေကြီးမိုးကြီး ပြောလျက် ပျက်သည့်အတိုင်း ဒုံးပေကတ်သတ် အသားကျအောင် နေတတ်သည့် မိန်းမမှာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
၁၃) ရှေးဆန်သလောက် မက်လောက်စရာ ဘာတစ်ခုမျှ မကျန်တော့သည့် မိန်းမ-သမ၀ါယမ ၀န်ကြီးဌာန
၁၄) ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေတို့ကို ကောင်းစွာ ချင့်ချိန်၍ ဈေးသုံးအပြင် အ၀တ်အစား၊ လက်ဝတ်လက်စားတို့ကို အဖတ်တင်ရလေအောင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူ၊ အခြားသူတို့အား မည်မျှလောက်ရလျှင် မည်သို့မည်ပုံ လောက်ငအောင် သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သင်တန်းပို့ချရာ၌ စံထားရလောက်သူ၊ မိမိထံ Deposit သွင်းလျှင် လက်ခံ၍ Withdrawal ကို နားမလည်သူ အနှီကုမ္မာရီသည်ကား- ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ၀န်ကြီးဌာန
၁၅) မြင်လိုက်ရလျှင် စည်းစနစ်လွန်စွာကျနပြီး အလုပ်အကိုင် ထည်ထည်ဝါ၀ါ ရှိသလောက် ဘာရလဒ်မှ မည်မည်ရရ ပြစရာမရှိလာသော မ,ကြီးကျယ်မှာတမူ- လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန
၁၆) ဒင်းမိဘလက်ထက် အမွေရသမျှဖြင့် ငါ့တစ်သက်သုံးဖို့ချည်းဟု အားရပါးရ သွားရည်ကျမည်မကြံလေနှင့်၊ သူကိုယ်တိုင်သုံးစွဲထားသဖြင့် သွားကြားထိုးတံတစ်မျှင်စာ ရလျှင် ကံကောင်းမည်ဟုသာ မှတ်ပါလေ။ ထိုသို့သော အမွေပုံရှင်မှာ- သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန
၁၇) မျက်စိသူငယ်၊ နားသူငယ်၊ သနားဖွယ်ရာအတိ။ မိဘထံမှလည်း လောက်ငအောင် မရရှာ။ သူ့ဘာသာသူလည်း လူမွေးလူတောင် ပြောင်အောင် မတတ်နိုင်ရှာ။ လူတကာ စုတ်တသပ်သပ်ပင် ဖြစ်ကြသော်ငြား လားလားမျှ မျက်စောင်းထိုးခြင်းအမှု မပြုကြလေကုန်။ – မသိချင်ယောင် မဆောင်ပါနှင့်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါသည်။
၁၈) အရောင်းအ၀ယ် ကုန်သည်ပွဲစားကဲ့သို့ မျက်နှာထား အလွန်တော်သော၊ ပြင်ပဆက်ဆံရေးအလွန်များသော၊ စကားကို ခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုး၊ နောက်တစ်နေ့တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးတတ်နိုင်သော နှုတ်သီးကောင်းလျှာပါးမကလေးများနှင့်ကြုံလျင်- နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပေကိုးဟု သတိရပါ။
‘ဌာနလက်ကိုင်မရှိဝန်ကြီး’သူငယ်ချင်းတို့– စိတ်ဆိုးမည်မကြံကြလေနှင့်။ သင်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ၀န်ကြီးများကဲ့သို့ အခြေအနေတစ်ခု ရောက်အောင် တည်ဆောက်လာခဲ့ကြပြီးလေပြီ။ ၀န်ကြီးဘ၀ ရရှိကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသိအမှတ်ပြုရန်အတွက် ဌာနကို လိုက်ရှာနေကြရပေသော သင်တို့ဘ၀ကို နားလည်စာနာသောအားဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ၀န်ကြီးဌာန စာရင်းပြုစု ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုပြုစုထားသော ၀န်ကြီးဌာန Categories မှာ အကြမ်းဖျဉ်းမျှသာ ရှိသေး၏။ ထပ်မံတွေ့ရှိလာမည့် ၀န်ကြီးဌာနစာရင်းကို ယခုအကြမ်းဖျဉ်းစာရင်းတွင် တိုးချဲ့ဖြည့်သွင်းပေးမည် မဟုတ်ဘဲ Featuring Characteristics များကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းပါက အကြောင်းအားလျော်စွာ ပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း လက်သိပ်ထိုး သတင်းပေးလိုက်ပါသတည်း။
သင်သည် ပုရိသတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိမိအစွမ်းအစဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မိဘကူညီမှုဖြင့်ဖြစ်စေ အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်ထားအံ့။ ဒေါသစိတ်ဝင်ရန်မလိုချေ။ သင့်ခံနိုင်ရည်နှင့် သင်သာတည်း။ မင်းယောကျာင်္းသား၊ လူပျိုလားမြောက်လေပြီးက ၀န်ကြီးဘ၀ရောက်လေမှ ဌာနလက်ကိုင်မရှိသည့်အဖြစ်ကို ကြိုတင်မြင်ယောင်နိုင်ရန် အကြံပေးသည်ဟု သဘောပိုက်သင့်ပေသည်။ အကြောင်းသိ သူငယ်ချင်းများ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းကို ပြန်ကြားဖြေဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်လောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
Posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged Expectation, funny, Life, negotiation | 11 Comments
April 1, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
GOOD NEWS!!!!!! Are you in the PRIVATE COMPANY?
Finance minister has approvedaBill which comes into effect on 01.04.2009 and it states that all Privately Held companies need to giveaminimum salary increment of 15% to all employees every six months.
The bill also mentions that all employees be provided 24 days of casual leave every year.
Please see the attached document for the list of companies which will be brought under the umbrella of the Bill in the first round of implementation.
And if the name of your company features in the list, kindly circulate this mail among your colleague.
(See attached file: List of Companies.doc)
Posted in ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged individualism, Internet, Life |2Comments